७ चैत्र, २०७६ – Mero UK
Day: ७ चैत्र, २०७६
सेन्ट जेभियर्सलाई नतिजा रोक्न निर्देशन, अटेर गरे कारबाही गरिने
७ चैत्र, २०७६ ७ चैत्र, २०७६ / अनलाइन खबर
७ चैत, काठमाडौं । सरकारले सेन्ट जेभियर्स स्कुललाई प्रवेश परीक्षाको नतिजा रोक्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा विकास समन्वय इकाइ, ललितपुरका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद बरालले नतिजा रोक्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । अटेर गरे कानुनी कारबाही गरिने उनले बताए । सेन्ट जेभियर्स स्कुलले सरकारको निर्देशन विपरीत कक्षा १ मा छात्र तथा छात्राको भर्नाका लागि प्रवेश प्रवेश …
सेन्ट जेभियर्सलाई नतिजा रोक्न निर्देशन, अटेर गरे कारबाही गरिने Read More »
विश्वभरका धनी मानिसले औसत मानिसले जसरी सोच्दैनन् । लामो समयसम्म अत्यधिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नु निकै कठिन काम हो । सामान्य मनस्थिति भएका मानिसबाट यो काम सम्भव हुँदैन । केही मानिसले अचानक धेरै सम्पत्ति पाएपछि त्यसलाई लामो समयसम्म बचाएर राख्न सक्दैनन् । त्यसमा पनि यस किसिमको मनस्थितिले काम गरेको हुन्छ । धनी मानिसहरुलाई हेर्ने हो भने …
धनी मानिसहरु कति फरक ढंगले सोच्छन् ? Read More »
यात्रुसँग बढी भाडा लिने २३ जना पक्राउ
७ चैत, काठमाडौं । यात्रुसँग तोकिए भन्दा बढी भाडा लिएको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौंबाट २३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं बाहिर जाने यात्रुसँग तोकिए भन्दा बढी भाडा लिएको आरोपमा बारा घर भई बल्खु बस्ने ३२ वर्षीय मुकेशप्रसाद साह लगायत २३ जनालाई शुक्रबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले विश्वभर महामारीको …
यात्रुसँग बढी भाडा लिने २३ जना पक्राउ Read More »
सुनसान बन्दैछ काठमाडौं : मलदेखि असन बजारसम्म (फोटोफिचर)
७ चैत, काठमाडौं । अधिकांश समय ग्राहकको बाक्लो चहलपहलल हुने काठमाडौंको व्यापारिक क्षेत्र र मलहरु कोरोनाको त्रासले सुनसान बन्न थालेका छन् । काठमाडौंका सपिङ सेन्टर, मलहरु, खुला बजारलगायतका क्षेत्रहरु सुनसान हुन थालेका हुन् । सिभिल मल, सिटी सेन्टर, असन, लबिम मल, छायाँ सेन्टर, विशाल बजार, केएल टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, » पुरा समाचार पढ्नुहोस
कोरोनाको त्रासले रोकिए साहित्यिक कार्यक्रम
७ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण पछिल्लो दुई सातादेखि ठूला साहित्यिक कार्यक्रम पनि रोकिएका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत नाट्य प्रतिष्ठान तथा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्ने कार्यक्रम रोकिएका छन् । प्रज्ञाले सरकारको निर्देशनको पालना गर्दै चैत्र महिनामा हुने सबै कार्यक्रम रोकेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव जगतप्रसाद उपाध्यायले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले …
कोरोनाको त्रासले रोकिए साहित्यिक कार्यक्रम Read More »
संकट बाजा बजाएर आउँछ ?
नेपाली समाजमा प्रचलित उखान छ, ‘दशा बाजा बजाएर आउँदैन ।’ अर्थात संकटका क्षणहरु पूर्व संकेत गरेर आउँदैन । तर, भयानक महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले खतराको घण्टी बजाउँदै विश्व फन्को लगाइरहेको छ । उन्नत चिकित्सा पद्धती र संयन्त्र भएका विश्वका मुलुकलाई यो भाइरसले आच्छु–आच्छु पारिसकेको छ । भएभरका उपचार विधी र संयन्त्र प्रयोग गर्दापनि …
संकट बाजा बजाएर आउँछ ? Read More »